Febroary 14, 2018 Admin
Mario Draghi, filohan 'ny Banky Foibe Eoropeana, efa nilaza fa tsy ny asa ny fikambanana ny fandrindràna cryptocurrencies.
Izay tafiditra ao amin'ny lahatsary #AskDraghi ECB ny andian-dahatsoratra, Italiana teo aloha mpiasan'ny banky foibe hoy izy dia nahita tao amin'ny Twitter ireo mpampiasa maro manontany raha toa ny ECB mety arindran'ilay na handràra bitcoin.
Ho setrin'izany, hoy izy:
“Tsy ny ECB ny andraikitra hanao izany.”
Blockchain dia zava-baovao ny teknolojia izay mety hanatsarana ny fahaiza-miasa mahomby. Fanombanana izahay na azo ampiasaina amin 'ny asa amin'ny ho avy. Ny amin'i bitcoin ary raha tokony hatoky azy, Manoro hevitra ny Filoha Draghi fampitandremana, araka ny tsy tohanan'ny misy banky foibe na ny fitondram-panjakana, nampiany fa tsy ny ECB ny asa ho fitsipika momba azy io.
Previous Post:Nahoana Coinbase Voampanga ho overloading ny Bitcoin harato sy ny fomba asa SegWit ?
Next Post:Mivadika Amin'ny Vadinao fiantrana dia mandray $ 70M tao Bitcoin fanomezana mandritra 2017
hamlet hoy i:
Febroary 23, 2018 amin'ny 8:40 PM
Harlow hoy i:
March 1, 2018 amin'ny 9:02 AM